ရိုဟင်ဂျာ Genocide အမှု မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စွဲဆိုခွင့် ရှိ ကြောင်း ICJ မှာ Gambia လျှောက်လဲ (VOA မြန်မာပိုင်း ဌာနမှူး ဦးသန်းလွန်ထွန်း ကို VOA မြန်မာပိုင်း အယ်ဒီတာ ဦးကျော်ဇံသာ က မေးမြန်းတင်ပြထားပါသည်)
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့က နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ နိုင်ငံတကာ တရားရုံးမှာ ပြုလုပ်သွားတဲ့ ဂမ်ဘီယာ နဲ့ မြန်မာအမှု ဒုတိယ အကြိမ်ကြားနာပွဲမှာ ဒုတိယနေ့ အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု Genocide ကျူးလွန်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက လျှောက်ထားစွဲဆိုနိုင်ကြောင်း၊ ICJ အနေနဲ့လည်း ကြားနာစစ်ဆေးနိုင်ကြောင်း ဥပဒေအကိုးအကားတွေနဲ့ ဂမ်ဘီယာဖက်က ချေပလျှောက်လဲသွားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း နဲ့ ဦးကျော်ဇံသာ တို့က မေးမြန်းတင်ပြမှာပါ။
ဦးကျော်ဇံသာ (အယ်ဒီတာ၊ VOA မြန်မာဌာန) ။. ။ ဦးသန်းလွင်ထွန်း ခင်ဗျာ။ ICJ နိုင်ငံတကာ တရားရုံးမှာ Gambia Vs Myanmar ဂမ်ဘီယာနဲ့ မြန်မာဖြစ်တဲ့အမှုကို ဒုတိယအကြိမ် ကြားနာပွဲပြုလုပ်နေပါတယ်။ မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ဒုတိယအကြိမ် ကြားနာပွဲ ရဲ့ ဒုတိယနေ့အဖြစ်နဲ့ ကြားနာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဂမ်ဘီယားနိုင်ငံက ပြန်လည်ပြီးတော့ လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမနေ့မှာတော့ မြန်မာဖက်က လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒုတိယနေ့အခြေအနေမပြောခင် ပထမနေ့တုံးက မြန်မာဖက်က လျှောက်လွှဲခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျဉ်းခြုံးလေ ပြန်ပြောပေးပါလားခင်ဗျာ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ( ဌာနမှူး VOA မြန်မာဌာန) ။. ။ ဟုတ်ကဲ့ ၊ ပထမနေ့ မြန်မာဖက်က လျှောက်လဲမှုတွေမှာတော့ တကယ်တန်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဟိုပထမပိုင်းပေါ့နော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက် ၂ဝ၁၉ ဒီဇင်ဘာတုံးက ဂမ်ဘီယာ ကနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ဦးတိုက်လျှောက်ထားတဲ့ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချေပခဲ့တဲ့ အချက်တချို့အပါအဝင်ပေါ့။ အဲဒါတွေပဲ ပြန်ပြီးတော့ ချေပတာလို့ မြင်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပထမတခေါက်တုံးက ၂ဝ၁၉ ဒီဇင်ဘာတုံးကပေါ့နော်။ အဲဒီတုံးက ဦးကျော်ဇံသာ တို့လည်း သွားပြီးတော့ သတင်းယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုံးက အဓိက ဦးတည်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ ဂမ်ဘီယာက စွပ်စွဲတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုံးသတ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို သေချာလက်ခံပြီး စစ်ဆေးမယ့်အစားကို ဒီကိစ္စ ဒီကိစ္စတွေက ဖြစ်နေတယ်။ ဒီကိစ္စကို လက်ခံကြောင်း မဆုံးဖြတ်ခင်မှာ ပြသာနာတွေကို ထပ်ပြီးကြီးမသွားအောင်အတွက်ဆိုပြီး ကြားဖြတ်ကာလမှာ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရမယ့် ကိစ္စတွေကို တင်သွင်းပါတယ်ဆိုပြီး ဂမ်ဘီယာ က ကြားဖြတ်အနေနဲ့ တင်သွင်းတာကိုး။ ဒီတင်သွင်းချက်တွေကို အဲဒီတုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်။ ဒါတွေတော့ လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုပြီး ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ မအောင်မြင်ဘူး။ ဗမာဖက်က ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ် ပြောလိုရတယ်ပေါ့နော်။ ဂမ်ဘီယာရဲ့ တင်သွင်းချက်ကို ICJ က လက်ခံပြီးတော့ ဗမာနိုင်ငံမှာလုပ်ရမယ့် ကြားဖြတ်စီမံချက်တွေပေါ့နော်။ အဲဒါတွေကို အတည်ပြုပြီးတော့ ဗမာနိုင်ငံကိုလည်း ၆ လတကြိမ် ဒီကိစ္စတွေအပေါ် အစီရင်ခံစာတင်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ (အယ်ဒီတာ၊ VOA မြန်မာဌာန) ။. ။ ဒုတိယကြားနာပွဲဖြစ်တဲ့ ဂမ်ဘီယာ က ချေပတဲ့ ကိစ္စကိုလည်း ပြောပါအုန်းခင်ဗျ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ( ဌာနမှူး VOA မြန်မာဌာန) ။. ။ အဲဒီမှာ ကျနော် စောစောက ဖြေတုံးက ကျန်ခဲ့တာက ပထမနေ့မှာ မြန်မာဖက်က ဘာပြောလဲဆိုတော့ အဓိက ၄ ချက်ပေါ့နော်။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာ သူရဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်စွဲတာမဟုတ်ပဲနဲ့ OIC လိုခေါ်တဲ့ အစ္စလမ္မစ်အဖွဲ့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ စွဲတဲ့ ကိုယ်စားပြုစွဲတဲ့ကိစ္စမို့ ဒီကိစ္စမျိုး အကြုံမဝင်ဘူးပေါ့နော်။ ICJ လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာဆိုပြီး နံပတ် ၁ ကန့်ကွက်တယ်။ နံပတ် ၂ အချက်ကတော့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းက ရိုဟင်ဂျာတွေအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ထိခိုက် နစ်နာရတဲ့နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူး။ အဝေးကြီးမှာပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်သက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် တရားစွဲဆိုခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်။ နံပတ် ၃ ကတော့ Genocide လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ကာကွယ်ရေး ပဋိညဉ် စာချုပ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ ပတ်သက်တယ်။ အဲဒီအထဲမှာပါတဲ့ အပိုဒ် ၈ ဆိုတဲ့အချက်ကို ဗမာကနေပြီး ခြွင်းချက်အနေနဲ့ လက်မှတ်ထိုးထားတာဆိုတော့ အဲလိုခြွင်းချက်ထားထားပြီးသားမိုလို့ ဂမ်ဘီယာရဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို ဗမာအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းစရာမလိုဘူးလို့ပြောတယ်။ နောက်ဆုံးတချက်ကတော့ ဂမ်ဘီယာ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအကြားမှာ ပြသာနာ အငြင်းပွားမှု တစုံတရာ ဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။ မရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီကိစ္စတွေကို ၂ ဖက်မရှင်းပဲနဲ့ တရားရုံးအထိတက်ပြီးတော့ လျှောက်ထားပိုင်ခွင့် ဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီး ဒီအချက်တွေနဲ့ ငြင်းခဲ့တာ။
ဦးကျော်ဇံသာ (အယ်ဒီတာ၊ VOA မြန်မာဌာန) ။. ။ အခု ဒုတိယနေ့မှာ ဂမ်ဘီယာဖက်က ပြန်လည်ချေပတဲ့ကိစ္စကိုလည်း ဆက်ပါအုန်း။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ( ဌာနမှူး VOA မြန်မာဌာန) ။. ။ တချက်ချင်းစီမှာဆိုလိုရှိရင် OIC ကို ကိုယ်စားပြုပြီးစွဲတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ပြန်ချေပတဲ့နေရာမှာ ကျုပ်တို့ကတော့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာ သေးပေမယ့် အချုပ်အခြာနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ သြဇာခံနိုင်ငံမဟုတ်သလို ဘယ်နိုင်ငံကိုမှ ကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်ဘူး ။ သူကဘာပြောသလဲဆိုတော့ အလားတူပဲ အခုတိုင်ကြားတဲ့ကိစ္စဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ လူအခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်တိုင်းကြားခံရမှုကို သူတို့ ကာကွယ်ပေးဖို့တင်မကဘူး ။ Genocide Convention ကို လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုအနေနဲ့ နောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တာဝန်ပေါ့လျော့ ဖောက်ဖျက်မှုတွေကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အရေးယူအပြစ်ပေးဖို့ ဆိုပြီးတော့ ဂန်ဘီယာနိုင်ငံက ကိုယ်ဖာသာတိုင်တာဆိုပြီး ပြန်ဖြေကြားတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ဥပဒေအထောက်အထားတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ အရှည်ကြီးမပြောတော့ပါဘူး။ ဒုတိယအချက်ကိုတော့ စောစောကပြောသလို "INJURED STATE" လို့သုံးတာပေါ့နော်။ အဲဒါက ဒီပြသာနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုက်ရိုက်နစ်နာမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံလို့ မြန်မာနိုင်ငံဖက်က ပြန်ချေပချက်ပေါ့နော်။ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက အဝေးကြီးပဲ ဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဘာမှပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ့။ ကျနော်တို့က ဥပဒေပညာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ဥပဒေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း အကိုးအကား လက်တင်ဘာသာတွေကော ၊ ပြင်သစ်ဘာသာတွေကော ၊ ဥပဒေစီရင်ထုံးတွေကော ၊ လျှောက်လွှဲချက် ၊ သုံးသပ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်နဲ့ သီအိုရီတွေကော ၊ ဒါတွေက ကျနော်တို့က ရုတ်တရက်နားထောင်ပြီးတော့ နားလည်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူး။ ချေပချက်ကတော့ နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်။ သူတို့ကိုးကားတာဆိုရင် အရင်တုံးက ဘော့စနီးယားမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဒီလို နီးစပ်မှုရှိမရှိ အဲဒါတွေလည်း ကိုးကားတယ်။ အကြမ်းဖျင်းကတော့ သူအနေနဲ့ ပြန်ချေပတာက တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံ ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့ အဓိက မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ကာကွယ်တားဆီးရေးသာ အဓိကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။
ဦးကျော်ဇံသာ (အယ်ဒီတာ၊ VOA မြန်မာဌာန) ။. ။ တတိယအချက်လည်း ပြောပါအုန်း။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ( ဌာနမှူး VOA မြန်မာဌာန) ။. ။ တတိယအချက်ကတော့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ အဲဒီမှာ ကျနော် Learn လုပ်တာပေါ့နော်။ ဥပမာအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ Call Upon ဆိုတဲ့ စကားက Oxford English Dictionary ထဲမှာဆိုရင် မေတ္တာရပ်ခံ တိုင်ကြားတယ်ပေါ့။ အကြောင်းကြားတိုင်ကြားပြီးတော့ အရေးယူပေးဖို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာ။ Call Upon ဆိုတဲ့စကားက ရိုဟင်ဂျာ Genocide Convention ပဋိညဉ်စာတမ်းရဲ့ အပိုဒ် ၈ မှာပါတယ်။ အဲဒါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ဆိုရင် စောစောက အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြင်သစ်ဘာသာ၊ စပိန်ဘာသာတွေနဲ့ သွားပြီးတော့ ရေးထားတဲ့စာမှာ အဓိပ္ပါယ်ဖော်မယ်ဆိုရင် သူက" Seizing the court" အဲဒါက တရားရုံးတော်ကို ဦးတိုက်လျှောက်ထားတယ်ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ အဲဒါအပြင်ကို Call upon to the competent organs of the united nations ဆိုတဲ့စကားတွေကို အတိအကျ ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ the competent organs of the united nations ကုလသမဂ္ဂရဲ့လက်အောက်ခံ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလိုပဲ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဟိုတနေ့က ပြောခဲ့တဲ့ ဗမာရဲ့ ချေပချက်ထဲမှာတော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေလို့မသုံးပဲနဲ့ ICJ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်တယ်။ အပိုဒ် ၈ ထဲမှာ လက်မခံပဲနဲ့ ခြွင်းချက်ထားခဲ့တာက ဘာလဲဆိုတော့ ဗမာကပြောခဲ့တာက ICJ ကို ဦးတိုက်လျှောက်ထားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ခြွင်းချက်ထားပြီး လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာမို့ အခုဗမာကိစ္စလာကိုင်နေတာကို လက်မခံဘူးလို့ သူကပြောချင်တာ။ ဒီနေ့ချေပတဲ့အခါကြတော့ ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုံးကလည်း ICJ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့တုံးကလည်း အကြမ်းဖျင်းသဘော ဒီလောက်အထိ အတိအကျမပြောပေမယ့် သူတို့ပြောတဲ့အထဲမှာ အသေးစိတ်လေးတွေ မပါဘူး။ အပိုဒ် ၈ ကို ခြွင်းချက်ထားတဲ့အတွက် တရားမစွဲသင့်ပါဘူးပြောခဲ့တာတော့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနောက်ဆက် အပိုဒ် ၉ ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ အဲဒီအထဲမှာ တိတိကျကျညွှန်းထားတယ်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ အချင်းချင်းကြားမှာ ဖောက်ဖျက်မှုတွေရှိလို့ရှိရင် ICJ ဆိုတဲ့တိတိကျကျ ဦးတိုက်လျှောက်ထားခွင့်ရှိတယ်လို့ရေးထားတယ်။ ဒီလိုလက်မှန်ထိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့တခေါက်ကလည်း ICJ က ဂမ်ဘီယာဖက်ကို အနိုင်ပေးပြီးတော့. ဗမာဖက်ကို စွဲခွင့်ရှိတယ်ပြောပြီးပြီ။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဆက်လုပ်ပါပေါ့ဗျာ။ ဒီနေ့ ဂမ်ဘီယာ က ပြောတဲ့သဘောကတော့ ။
ဦးကျော်ဇံသာ (အယ်ဒီတာ၊ VOA မြန်မာဌာန) ။. ။ ဒါဆို လျှောက်လွှဲပြီးသား ကိစ္စတွေကို ထပ်ပြီးတော့ လျှောက်သလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ( ဌာနမှူး VOA မြန်မာဌာန) ။. ။ အဲဒါပေါ့ဗျာ။ နံပတ် ၄ အချက်ဆိုတာလည်း ကျန်ခဲ့သေးတယ်။ နံပတ် ၄ အချက်ဆိုတာလည်း လျှောက်လွှဲပြီးသား သဘောပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဂမ်ဘီယာ နဲ့ ဗမာကြားမှာ ဘာပြသာနာမှ မရှိပါဘူးဆိုပြီး ဗမာက အကြမ်းဖျင်းပြောခဲ့တာပဲ။ ဂမ်ဘီယာ က ပြောတယ် ဗမာကို တိတိကျကျ တရားစွဲမယ်တို့ အပြန်အလှန်ငြင်းတာ ခုံတာတွေမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ စာ ၂ မျက်နှာရှိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို လှမ်းပို့တယ်။ ပို့ပေးပြီးတော့ အဲဒီထဲမှာလည်း တိတိကျကျ ဘယ်လောက်ကြာလို့ ရှိရင် ပြန်ဖြေရမယ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ မပါဘူးပေါ့နော်။ အကြောင်းမပြန်ဘူးပေါ့နော်။ အကြောင်းမပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီကိစ္စမှာ ဘာမှ ပြသာနာမရှိတဲ့အတွက် ရုံးတော်အထိ ဦးတိုက်လျှောက်ထားရတာ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ပထမတခါ အကြောင်းပြန်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီကိစ္စကို ကုလသမဂ္ဂမှာ ဂမ်ဘီယာ က ပြောခဲ့ဘူးတယ်။ ဦးကျော်တင့်ဆွေ က ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ အလားတူပဲ OIC ဆိုတဲ့အဖွဲ့
မှာ ဂမ်ဘီယာ က ဦးဆောင်ပြီး ဗမာအရေး ရိုဟင်ဂျာ က ကန့်ကွက်ပါမယ်ပြောတယ်။ အဲဒီတုံးက မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဌာန က ကန့်ကွက်တယ်ဆိုပြီး ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေဟာ ၂ ဖက်ကြား ငြင်းခုံမှုတွေ မဟုတ်ဘူးလားလို့ အပြန်လှန် မေးခွန်းထုတ်တာ။ ဒါအပြင် နည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းတွေပေါ့။ Silence Veto ဆိုပြီး သုံးသွားတယ်။ တဖက်နဲ့ တဖက် အငြင်းပွားကြရင် တဖက်က ပြန်မပြောဘူး နုတ်ဆိတ်နေတာ ဆိုတာပေါ့။ တဖက်က ဘာမှပြန်မပြော ဘာမှမလုပ် လျှစ်လျှူရှုထားတာ။ အဲဒါဆိုရင် ပြသာနာမရှိဘူးလို့ ပြောရမလားဆိုပြီး မေးခွန်းပြန်ထုတ်ထားတာ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ (အယ်ဒီတာ၊ VOA မြန်မာဌာန) ။. ။ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်တော့ ဟိုပထမ အကြိမ်တုံးက လျှောက်လဲခဲ့တာ၊ ချေပခဲ့တာတွေကို ပိုချဲ့ပြီးတော့ ပြောတဲ့စကား ၊ဥပဒေအသုံးအနှုန်းတွေပိုများလာတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ကော တရားရုံး သဘာပတိရဲ့ နောက်ဆုံး မှတ်ချက်စကားပြောပါအုန်း။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ( ဌာနမှူး VOA မြန်မာဌာန) ။. ။ သူကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကို အဆုံးသတ် ပြောပြတာပေါ့နော်။ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ဗမာက တနာရီခွဲ ရမယ်။ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ဂမ်ဘီယာက နောက်ထပ် တနာခွဲရမယ်။ အဲဒါက ဒီ ၃ နာရီပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကို မူတည်ပြီးတော့မှ သူတို့အနေနဲ့ နောက်ထပ် ဘာအကြောင်းပြပြီးတော့ ငြင်းမလဲဆိုတာပဲ သိချင်တာ။ အဲဒီတော့ ဒီတနာရီခွဲ ပြေတဲ့အခါမှာ ပြောပြီးသားတွေ ထပ်မပြောနဲ့တော့ ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သတိပေးလိုက်တာပါ။
ဦးကျော်ဇံသာ (အယ်ဒီတာ၊ VOA မြန်မာဌာန) ။. ။ ကဲ ဦးသန်းလွန်ထွန်း ကျနော်တို့ နောက်နေ့တွေ ဆက်ကြတာပေါ့ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
Ko Ko Hlaing at ICJ hearing
ဖဖေျောဝါရီလ ၂၂ ရကျနကေ့ နယျသာလနျနိုငျငံ The Hague မွို့ နိုငျငံတကာ တရားရုံးမှာ ပွုလုပျသှားတဲ့ ဂမျဘီယာ နဲ့ မွနျမာအမှု ဒုတိယ အကွိမျကွားနာပှဲမှာ ဒုတိယနေ့ အဖွဈ မွနျမာနိုငျငံဟာ ရိုဟငျဂြာတှအေပျေါ လူမြိုးတုံး သတျဖွတျမှု Genocide ကြူးလှနျတယျဆိုတဲ့ကိစ်စကို ဂမျဘီယာနိုငျငံက လြှောကျထားစှဲဆိုနိုငျကွောငျး၊ ICJ အနနေဲ့လညျး ကွားနာစဈဆေးနိုငျကွောငျး ဥပဒအေကိုးအကားတှနေဲ့ ဂမျဘီယာဖကျက ခပြေလြှောကျလဲသှားပါတယျ။ အသေးစိတျကိုတော့ ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျးဌာနမှူး ဦးသနျးလှငျထှနျး နဲ့ ဦးကြျောဇံသာ တို့က မေးမွနျးတငျပွမှာပါ။
ဦးကြျောဇံသာ (အယျဒီတာ၊ VOA မွနျမာဌာန) ။. ။ ဦးသနျးလှငျထှနျး ခငျဗြာ။ ICJ နိုငျငံတကာ တရားရုံးမှာ Gambia Vs Myanmar ဂမျဘီယာနဲ့ မွနျမာဖွဈတဲ့အမှုကို ဒုတိယအကွိမျ ကွားနာပှဲပွုလုပျနပေါတယျ။ မနကေ့ ဖဖေျောဝါရီ ၂၂ ရကျနမှေ့ာ ဒုတိယအကွိမျ ကွားနာပှဲ ရဲ့ ဒုတိယနအေ့ဖွဈနဲ့ ကွားနာခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီမှာ ဂမျဘီယားနိုငျငံက ပွနျလညျပွီးတော့ လြှောကျထားတာဖွဈပါတယျ။ ပထမနမှေ့ာတော့ မွနျမာဖကျက လြှောကျထားတာဖွဈပါတယျ။ ဆိုတော့ ဒုတိယနအေ့ခွအေနမေပွောခငျ ပထမနတေုံ့းက မွနျမာဖကျက လြှောကျလှဲခဲ့တဲ့ ကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး အကဉျြးခွုံးလေ ပွနျပွောပေးပါလားခငျဗြာ။
ဦးသနျးလှငျထှနျး ( ဌာနမှူး VOA မွနျမာဌာန) ။. ။ ဟုတျကဲ့ ၊ ပထမနေ့ မွနျမာဖကျက လြှောကျလဲမှုတှမှောတော့ တကယျတနျးပွောရမယျဆိုလို့ရှိရငျ ဟိုပထမပိုငျးပေါ့နျော လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈလောကျ ၂ဝ၁၉ ဒီဇငျဘာတုံးက ဂမျဘီယာ ကနပွေီး မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ရိုဟငျဂြာအရေးကို ဦးတိုကျလြှောကျထားတဲ့ကိစ်စ နဲ့ ပတျသကျပွီး ခပြေခဲ့တဲ့ အခကျြတခြို့အပါအဝငျပေါ့။ အဲဒါတှပေဲ ပွနျပွီးတော့ ခပြေတာလို့ မွငျလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပထမတခေါကျတုံးက ၂ဝ၁၉ ဒီဇငျဘာတုံးကပေါ့နျော။ အဲဒီတုံးက ဦးကြျောဇံသာ တို့လညျး သှားပွီးတော့ သတငျးယူခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီတုံးက အဓိက ဦးတညျခကျြက ဘာလဲဆိုတော့ ဂမျဘီယာက စှပျစှဲတဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ရိုဟငျဂြာတှကေို လူမြိုးတုံးသတျနပေါတယျဆိုတဲ့ စှပျစှဲခကျြကို သခြောလကျခံပွီး စဈဆေးမယျ့အစားကို ဒီကိစ်စ ဒီကိစ်စတှကေ ဖွဈနတေယျ။ ဒီကိစ်စကို လကျခံကွောငျး မဆုံးဖွတျခငျမှာ ပွသာနာတှကေို ထပျပွီးကွီးမသှားအောငျအတှကျဆိုပွီး ကွားဖွတျကာလမှာ အရေးယူဆောငျရှကျပေးရမယျ့ ကိစ်စတှကေို တငျသှငျးပါတယျဆိုပွီး ဂမျဘီယာ က ကွားဖွတျအနနေဲ့ တငျသှငျးတာကိုး။ ဒီတငျသှငျးခကျြတှကေို အဲဒီတုံးက ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဦးဆောငျတဲ့အဖှဲ့ပေါ့နျော။ ဒါတှတေော့ လုပျစရာမလိုဘူးဆိုပွီး ကနျ့ကှကျခဲ့တယျ။ မအောငျမွငျဘူး။ ဗမာဖကျက ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ ပွောလိုရတယျပေါ့နျော။ ဂမျဘီယာရဲ့ တငျသှငျးခကျြကို ICJ က လကျခံပွီးတော့ ဗမာနိုငျငံမှာလုပျရမယျ့ ကွားဖွတျစီမံခကျြတှပေေါ့နျော။ အဲဒါတှကေို အတညျပွုပွီးတော့ ဗမာနိုငျငံကိုလညျး ၆ လတကွိမျ ဒီကိစ်စတှအေပျေါ အစီရငျခံစာတငျရမယျဆိုတာနဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျတယျ။
ဦးကြျောဇံသာ (အယျဒီတာ၊ VOA မွနျမာဌာန) ။. ။ ဒုတိယကွားနာပှဲဖွဈတဲ့ ဂမျဘီယာ က ခပြေတဲ့ ကိစ်စကိုလညျး ပွောပါအုနျးခငျဗြ။
ဦးသနျးလှငျထှနျး ( ဌာနမှူး VOA မွနျမာဌာန) ။. ။ အဲဒီမှာ ကနြျော စောစောက ဖွတေုံးက ကနျြခဲ့တာက ပထမနမှေ့ာ မွနျမာဖကျက ဘာပွောလဲဆိုတော့ အဓိက ၄ ခကျြပေါ့နျော။ အတိုခြုပျပွောရမယျဆိုရငျ ဂမျဘီယာနိုငျငံဟာ သူရဲ့နိုငျငံအနနေဲ့ ကိုယျတိုငျစှဲတာမဟုတျပဲနဲ့ OIC လိုချေါတဲ့ အစ်စလမ်မဈအဖှဲ့ရဲ့ ညှနျကွားခကျြနဲ့ စှဲတဲ့ ကိုယျစားပွုစှဲတဲ့ကိစ်စမို့ ဒီကိစ်စမြိုး အကွုံမဝငျဘူးပေါ့နျော။ ICJ လုပျငနျးစဉျထဲမှာဆိုပွီး နံပတျ ၁ ကနျ့ကှကျတယျ။ နံပတျ ၂ အခကျြကတော့ ဂမျဘီယာနိုငျငံဟာ မွနျမာနိုငျငံအနောကျမွောကျပိုငျးက ရိုဟငျဂြာတှအေရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ကိုယျတိုငျထိခိုကျ နဈနာရတဲ့နိုငျငံလညျးမဟုတျဘူး။ အဝေးကွီးမှာပေါ့နျော။ အဲဒီတော့ ဒီကိစ်စတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ကိုယျတိုငျသကျဆိုငျမှုမရှိတဲ့အတှကျကွောငျ့ တရားစှဲဆိုခှငျ့မရှိဘူးပေါ့နျော။ နံပတျ ၃ ကတော့ Genocide လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှု ကာကှယျရေး ပဋိညဉျ စာခြုပျကိုယျတိုငျနဲ့ ပတျသကျတယျ။ အဲဒီအထဲမှာပါတဲ့ အပိုဒျ ၈ ဆိုတဲ့အခကျြကို ဗမာကနပွေီး ခွှငျးခကျြအနနေဲ့ လကျမှတျထိုးထားတာဆိုတော့ အဲလိုခွှငျးခကျြထားထားပွီးသားမိုလို့ ဂမျဘီယာရဲ့ စှပျစှဲခကျြကို ဗမာအနနေဲ့ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးစရာမလိုဘူးလို့ပွောတယျ။ နောကျဆုံးတခကျြကတော့ ဂမျဘီယာ နဲ့ မွနျမာနိုငျငံအကွားမှာ ပွသာနာ အငွငျးပှားမှု တစုံတရာ ဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။ မရှိခဲ့တဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒီကိစ်စတှကေို ၂ ဖကျမရှငျးပဲနဲ့ တရားရုံးအထိတကျပွီးတော့ လြှောကျထားပိုငျခှငျ့ ဆိုတာမရှိဘူးဆိုပွီး ဒီအခကျြတှနေဲ့ ငွငျးခဲ့တာ။
ဦးကြျောဇံသာ (အယျဒီတာ၊ VOA မွနျမာဌာန) ။. ။ အခု ဒုတိယနမှေ့ာ ဂမျဘီယာဖကျက ပွနျလညျခပြေတဲ့ကိစ်စကိုလညျး ဆကျပါအုနျး။
ဦးသနျးလှငျထှနျး ( ဌာနမှူး VOA မွနျမာဌာန) ။. ။ တခကျြခငျြးစီမှာဆိုလိုရှိရငျ OIC ကို ကိုယျစားပွုပွီးစှဲတယျဆိုတဲ့အခကျြကို ပွနျခပြေတဲ့နရောမှာ ကြုပျတို့ကတော့ ဂမျဘီယာနိုငျငံဟာ သေးပမေယျ့ အခြုပျအခွာနိုငျငံဖွဈတယျ။ ဘယျနိုငျငံရဲ့ သွဇာခံနိုငျငံမဟုတျသလို ဘယျနိုငျငံကိုမှ ကိုယျစားပွုတာမဟုတျဘူး ။ သူကဘာပွောသလဲဆိုတော့ အလားတူပဲ အခုတိုငျကွားတဲ့ကိစ်စဟာ ရိုဟငျဂြာတှရေဲ့ လူအခှငျ့အရေးဖောကျဖကျြတိုငျးကွားခံရမှုကို သူတို့ ကာကှယျပေးဖို့တငျမကဘူး ။ Genocide Convention ကို လကျမှတျထိုးထားတဲ့အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတခုအနနေဲ့ နောကျထပျအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတခုဖွဈတဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ တာဝနျပေါ့လြော့ ဖောကျဖကျြမှုတှကေို ကိုယျတိုငျဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ အရေးယူအပွဈပေးဖို့ ဆိုပွီးတော့ ဂနျဘီယာနိုငျငံက ကိုယျဖာသာတိုငျတာဆိုပွီး ပွနျဖွကွေားတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျလို့တော့ ဥပဒအေထောကျအထားတှတေော့ရှိတာပေါ့ဗြာ။ အရှညျကွီးမပွောတော့ပါဘူး။ ဒုတိယအခကျြကိုတော့ စောစောကပွောသလို "INJURED STATE" လို့သုံးတာပေါ့နျော။ အဲဒါက ဒီပွသာနာနဲ့ ပတျသကျပွီး တိုကျရိုကျနဈနာမှုမရှိတဲ့နိုငျငံလို့ မွနျမာနိုငျငံဖကျက ပွနျခပြေခကျြပေါ့နျော။ ဂမျဘီယာနိုငျငံက အဝေးကွီးပဲ ဒီရိုဟငျဂြာတှနေဲ့ဘာမှပတျသကျတာမဟုတျဘူးဆိုတဲ့အခကျြပေါ့။ ကနြျောတို့က ဥပဒပေညာရှငျလညျးမဟုတျဘူး။ ဥပဒဆေိုတဲ့နရောမှာလညျး အကိုးအကား လကျတငျဘာသာတှကေော ၊ ပွငျသဈဘာသာတှကေော ၊ ဥပဒစေီရငျထုံးတှကေော ၊ လြှောကျလှဲခကျြ ၊ သုံးသပျခကျြနဲ့ ပတျသကျနဲ့ သီအိုရီတှကေော ၊ ဒါတှကေ ကနြျောတို့က ရုတျတရကျနားထောငျပွီးတော့ နားလညျနိုငျတဲ့အကွောငျးအရာတှမေဟုတျဘူး။ ခပြေခကျြကတော့ နညျးနညျးရှုပျထှေးတယျ။ သူတို့ကိုးကားတာဆိုရငျ အရငျတုံးက ဘော့စနီးယားမှာ ဖွဈခဲ့တဲ့ကိစ်စတှမှော ဒီလို နီးစပျမှုရှိမရှိ အဲဒါတှလေညျး ကိုးကားတယျ။ အကွမျးဖငျြးကတော့ သူအနနေဲ့ ပွနျခပြေတာက တိုကျရိုကျသကျဆိုငျမှုမရှိတဲ့နိုငျငံ ဟုတျတယျ မဟုတျဘူးဆိုတာကတော့ အဓိက မဟုတျဘူးပေါ့နျော။ လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ လူမြိုးတုံး သတျဖွတျမှုတှကေို ကာကှယျတားဆီးရေးသာ အဓိကဖွဈတယျဆိုပွီးပွောသှားတာပါ။
ဦးကြျောဇံသာ (အယျဒီတာ၊ VOA မွနျမာဌာန) ။. ။ တတိယအခကျြလညျး ပွောပါအုနျး။
ဦးသနျးလှငျထှနျး ( ဌာနမှူး VOA မွနျမာဌာန) ။. ။ တတိယအခကျြကတော့ ပိုပွီးစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတယျ။ အဲဒီမှာ ကနြျော Learn လုပျတာပေါ့နျော။ ဥပမာအားဖွငျ့ အင်ျဂလိပျဘာသာမှာ Call Upon ဆိုတဲ့ စကားက Oxford English Dictionary ထဲမှာဆိုရငျ မတ်ေတာရပျခံ တိုငျကွားတယျပေါ့။ အကွောငျးကွားတိုငျကွားပွီးတော့ အရေးယူပေးဖို့ပွောတယျပေါ့ဗြာ။ Call Upon ဆိုတဲ့စကားက ရိုဟငျဂြာ Genocide Convention ပဋိညဉျစာတမျးရဲ့ အပိုဒျ ၈ မှာပါတယျ။ အဲဒါက အင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့ ဆိုရငျ စောစောက အဓိပ်ပါယျရတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွငျသဈဘာသာ၊ စပိနျဘာသာတှနေဲ့ သှားပွီးတော့ ရေးထားတဲ့စာမှာ အဓိပ်ပါယျဖျောမယျဆိုရငျ သူက" Seizing the court" အဲဒါက တရားရုံးတျောကို ဦးတိုကျလြှောကျထားတယျဆိုပွီး အဓိပ်ပါယျရတယျ။ အဲဒါအပွငျကို Call upon to the competent organs of the united nations ဆိုတဲ့စကားတှကေို အတိအကြ ဘာသာပွနျမယျဆိုရငျတော့ the competent organs of the united nations ကုလသမဂ်ဂရဲ့လကျအောကျခံ သကျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးတှလေိုပဲ အဓိပ်ပါယျရတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဟိုတနကေ့ ပွောခဲ့တဲ့ ဗမာရဲ့ ခပြေခကျြထဲမှာတော့ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ လကျအောကျခံအဖှဲ့အစညျးတှလေို့မသုံးပဲနဲ့ ICJ အပွညျပွညျဆိုငျရာ တရားရုံးဆိုပွီး အဓိပ်ပါယျသတျမှတျတယျ။ အပိုဒျ ၈ ထဲမှာ လကျမခံပဲနဲ့ ခွှငျးခကျြထားခဲ့တာက ဘာလဲဆိုတော့ ဗမာကပွောခဲ့တာက ICJ ကို ဦးတိုကျလြှောကျထားခှငျ့ရှိတယျဆိုတဲ့ အခကျြကို ခွှငျးခကျြထားပွီး လကျမှတျထိုးခဲ့တာမို့ အခုဗမာကိစ်စလာကိုငျနတောကို လကျမခံဘူးလို့ သူကပွောခငျြတာ။ ဒီနခေ့ပြေတဲ့အခါကွတော့ ပွီးခဲ့တဲ့အခေါကျတုံးကလညျး ICJ မှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဦးဆောငျတဲ့ အဖှဲ့တုံးကလညျး အကွမျးဖငျြးသဘော ဒီလောကျအထိ အတိအကမြပွောပမေယျ့ သူတို့ပွောတဲ့အထဲမှာ အသေးစိတျလေးတှေ မပါဘူး။ အပိုဒျ ၈ ကို ခွှငျးခကျြထားတဲ့အတှကျ တရားမစှဲသငျ့ပါဘူးပွောခဲ့တာတော့ရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီနောကျဆကျ အပိုဒျ ၉ ကို ပွနျကွညျ့လိုကျပွနျတော့ အဲဒီအထဲမှာ တိတိကကြညြှနျးထားတယျ။ အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတှေ အခငျြးခငျြးကွားမှာ ဖောကျဖကျြမှုတှရှေိလို့ရှိရငျ ICJ ဆိုတဲ့တိတိကကြ ဦးတိုကျလြှောကျထားခှငျ့ရှိတယျလို့ရေးထားတယျ။ ဒီလိုလကျမှနျထိုးထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့တခေါကျကလညျး ICJ က ဂမျဘီယာဖကျကို အနိုငျပေးပွီးတော့. ဗမာဖကျကို စှဲခှငျ့ရှိတယျပွောပွီးပွီ။ ဒီဆုံးဖွတျခကျြအတိုငျးဆကျလုပျပါပေါ့ဗြာ။ ဒီနေ့ ဂမျဘီယာ က ပွောတဲ့သဘောကတော့ ။
ဦးကြျောဇံသာ (အယျဒီတာ၊ VOA မွနျမာဌာန) ။. ။ ဒါဆို လြှောကျလှဲပွီးသား ကိစ်စတှကေို ထပျပွီးတော့ လြှောကျသလိုဖွဈနတောပေါ့နျော။
ဦးသနျးလှငျထှနျး ( ဌာနမှူး VOA မွနျမာဌာန) ။. ။ အဲဒါပေါ့ဗြာ။ နံပတျ ၄ အခကျြဆိုတာလညျး ကနျြခဲ့သေးတယျ။ နံပတျ ၄ အခကျြဆိုတာလညျး လြှောကျလှဲပွီးသား သဘောပဲ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဂမျဘီယာ နဲ့ ဗမာကွားမှာ ဘာပွသာနာမှ မရှိပါဘူးဆိုပွီး ဗမာက အကွမျးဖငျြးပွောခဲ့တာပဲ။ ဂမျဘီယာ က ပွောတယျ ဗမာကို တိတိကကြ တရားစှဲမယျတို့ အပွနျအလှနျငွငျးတာ ခုံတာတှမေရှိခဲ့ဘူးပေါ့နျော။ စာ ၂ မကျြနှာရှိတဲ့ အကွောငျးအရာလေးကို လှမျးပို့တယျ။ ပို့ပေးပွီးတော့ အဲဒီထဲမှာလညျး တိတိကကြ ဘယျလောကျကွာလို့ ရှိရငျ ပွနျဖွရေမယျ။ ဘာဆကျလုပျရမယျဆိုတာ မပါဘူးပေါ့နျော။ အကွောငျးမပွနျဘူးပေါ့နျော။ အကွောငျးမပွနျတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒီကိစ်စမှာ ဘာမှ ပွသာနာမရှိတဲ့အတှကျ ရုံးတျောအထိ ဦးတိုကျလြှောကျထားရတာ မဖွဈဘူးဆိုပွီး ပထမတခါ အကွောငျးပွနျခဲ့ပွီးပွီ။ ဒီကိစ်စကို ကုလသမဂ်ဂမှာ ဂမျဘီယာ က ပွောခဲ့ဘူးတယျ။ ဦးကြျောတငျ့ဆှေ က ကနျ့ကှကျခဲ့တယျ။ အလားတူပဲ OIC ဆိုတဲ့အဖှဲ့
မှာ ဂမျဘီယာ က ဦးဆောငျပွီး ဗမာအရေး ရိုဟငျဂြာ က ကနျ့ကှကျပါမယျပွောတယျ။ အဲဒီတုံးက မွနျမာနိုငျငံခွားရေးဌာန က ကနျ့ကှကျတယျဆိုပွီး ကွညောခကျြထုတျခဲ့တယျ။ ဒါတှဟော ၂ ဖကျကွား ငွငျးခုံမှုတှေ မဟုတျဘူးလားလို့ အပွနျလှနျ မေးခှနျးထုတျတာ။ ဒါအပွငျ နညျးနညျးထူးဆနျးတဲ့ အင်ျဂလိပျအသုံးအနှုနျးတှပေေါ့။ Silence Veto ဆိုပွီး သုံးသှားတယျ။ တဖကျနဲ့ တဖကျ အငွငျးပှားကွရငျ တဖကျက ပွနျမပွောဘူး နုတျဆိတျနတော ဆိုတာပေါ့။ တဖကျက ဘာမှပွနျမပွော ဘာမှမလုပျ လြှဈလြှူရှုထားတာ။ အဲဒါဆိုရငျ ပွသာနာမရှိဘူးလို့ ပွောရမလားဆိုပွီး မေးခှနျးပွနျထုတျထားတာ။ စိတျဝငျစားစရာကောငျးပါတယျ။
ဦးကြျောဇံသာ (အယျဒီတာ၊ VOA မွနျမာဌာန) ။. ။ အကွမျးဖငျြးပွောရရငျတော့ ဟိုပထမ အကွိမျတုံးက လြှောကျလဲခဲ့တာ၊ ခပြေခဲ့တာတှကေို ပိုခြဲ့ပွီးတော့ ပွောတဲ့စကား ၊ဥပဒအေသုံးအနှုနျးတှပေိုမြားလာတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျလို့ကော တရားရုံး သဘာပတိရဲ့ နောကျဆုံး မှတျခကျြစကားပွောပါအုနျး။
ဦးသနျးလှငျထှနျး ( ဌာနမှူး VOA မွနျမာဌာန) ။. ။ သူကတော့ ထုံးစံအတိုငျး ရှဆေ့ကျဘာလုပျမလဲဆိုတာကို အဆုံးသတျ ပွောပွတာပေါ့နျော။ ၂၅ ရကျနမှေ့ာ ဗမာက တနာရီခှဲ ရမယျ။ ၂၈ ရကျနမှေ့ာ ဂမျဘီယာက နောကျထပျ တနာခှဲရမယျ။ အဲဒါက ဒီ ၃ နာရီပွောခဲ့တဲ့အခကျြတှကေို မူတညျပွီးတော့မှ သူတို့အနနေဲ့ နောကျထပျ ဘာအကွောငျးပွပွီးတော့ ငွငျးမလဲဆိုတာပဲ သိခငျြတာ။ အဲဒီတော့ ဒီတနာရီခှဲ ပွတေဲ့အခါမှာ ပွောပွီးသားတှေ ထပျမပွောနဲ့တော့ ဆိုတဲ့အကွောငျးကိုပဲ နောကျဆုံးအနနေဲ့ သတိပေးလိုကျတာပါ။
ဦးကြျောဇံသာ (အယျဒီတာ၊ VOA မွနျမာဌာန) ။. ။ ကဲ ဦးသနျးလှနျထှနျး ကနြျောတို့ နောကျနတှေ့ေ ဆကျကွတာပေါ့ဗြာ။ ကြေးဇူးပါ။